News 18 Nepal || चीनकी वैज्ञानिकले दिइन् खुसीको खबर, खोपले गर्नेछ तीन वर्ष काम
चीनकी वैज्ञानिकले दिइन् खुसीको खबर, खोपले गर्नेछ तीन वर्ष काम
एजेन्सी । चिनियाँ नागरिकले नोभेम्बर वा डिसेम्बर महिनाबाट कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाउने एक उच्चपदस्थ वैज्ञानिकले बताएकी छन् । चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) प्रमुख जैविक सुरक्षा विज्ञ वु गुइचेनले अनेकौँ खोपको परीक्षण सहज तरिकाले अघि बढिरहेको र व्यापक उत्पादनको तयारी भइरहेको बताइन् ।
‘परीक्षण गर्ने समूहमा सहभागी भएर मैले पनि अप्रिलमै खोप लगाएँ,’ वुले सीसीटीभीसँग भनिन्, ‘पछिल्लो केही महिनामा मैले असामान्य केही महसुस गरेको छैन ।’
खोप लगाएपछि एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन् । यद्यपि त्यसका लागि लामो समय पर्खिनु पर्ने उनको भनाइ छ । वुले खोप उत्पादनका लागि दुई वटा प्लान्टलाई अनुमति दिइसकेको र तेस्रोका लागि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् ।
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सीन फार्मेसी पसलमा बेच्नलाई स्वीकृती
कोभिड-१९ बाट बच्न मास्क कति प्रभावकारी ? वैज्ञानिकले गरे नयाँ खुलासा
भारतीय कोरोनाविरुद्धको ‘भ्याक्सीन’को ‘ट्रायल’ सफल
कोरोनाविरूद्धको खोप बारे बेलायती कम्पनीले दियो खुसीको खबर !
कस्तो होला चीनमा तयार भएको कोरोना भ्याक्सीन ?
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोपको परीक्षण रोकियो